Logo jawaab celin ah: waa maxay iyo sida loo sameeyo mid | Hal-abuurka khadka tooska ah
Logo ka jawaabaya: waa maxay iyo sida loo sameeyo
Sida boggaga internetka ay awood u leeyihiin inay la qabsadaan iyadoo ku xiran qaabka loo soo bandhigayo, walxaha gudaha ee dhisaya waa inay sidaas sameeyaan. Logos waa qaybta garaafka ee tilmaamaysa shirkad oo ay macaamiishu ku hagaan marka ay wax iibsanayaan. Kuwaas sidoo kale waa inay noqdaan kuwo la qabsan kara oo isbedelaya iyadoo ku xiran xaaladda.
Isticmaalayaashu waa inay awoodaan inay gartaan aqoonsi isku mid ah iyo qiimaha astaanta, haddii ay ka baadhayaan kombuyuutar, taleefoonka gacanta ama ay arkaan xayeysiis daabacan. Qoraalkan waxaan ku sharaxay waa maxay sumadda ka jawaaba, sida aad u abuuri karto kaaga iyo halkan waxaa ah fikrado calaamado caan ah kuwaas oo awooday in ay la qabsadaan qaabab kala duwan.
1 Waa maxay summada ka jawaabaya?
1.1 Astaamaha summada ka jawaabaya
2 Sidee loo sameeyaa calaamad jawaab celin leh?
3 fikradaha logo jawaaba
3.3 Balance New
4 Gabagabo: maxaad u haysataa calaamad jawaab celin leh?
Waa maxay summada ka jawaabaya?
Calaamad jawaab celin ah ama sidoo kale loo yaqaan calaamad la qabsiga, waa a Logo oo awood u leh in ay la qabsato cabbirka muraayadda, sidaas awgeed way ku kala duwan tahay cabbirka, qaabka iyo booska. Ma lumin sharcinimada ama aqoonsiga astaanta lafteeda.
Astaantan waxay u ogolaataa astaanta inay la qabsato meel kasta. Shirkaduhu waxay u baahan yihiin inay sawiraan sida calaamadahoodu u ekaan doonto iyadoo ku xidhan mobaylka macaamiishooda ay isticmaalayaan. Sidoo kale, Caadi ahaan, marka calaamadda la nashqadeeyo, waxay leedahay noocyo iyo cabbirro kala duwan iyadoo ku xiran qaabka online-ka ah ee diiradda lagu saaro.
Waxaa jira shabakad la yiraahdo Logos ka jawaabaya, halkaas oo aad ku arki karto calaamado caan ah oo la qabsanaya hadba booska ay ku jiraan. Mareegta lafteeda ayaa kuu sheegaysa in aad wax ka bedesho daaqada browser-ka si aad u aragto sida calaamaduhu u habboon yihiin.
Astaamaha summada ka jawaabaya
Sidaan hore u soo sheegay. Dabeecadda ugu weyn ee sumadda ka jawaabi karta waa taas ku habboon dhammaan cabbirrada suurtagalka ah, qaababka iyo meelaha bannaan. Waxaa jiri kara dhowr nooc oo astaantan ah, waxay sidoo kale ku xirnaan doontaa qaabka toosan ama toosan. Waxay noqon karaan oo kaliya astaanta astaanta, magaca astaanta, midowga labadan ama calaamadda oo dhan, taas oo ah, magaca astaanta oo ay weheliyaan astaanta iyo calaamadda.
Tilmaamaha kale ee muhiimka ah waa aqoonsiga iyo fududaanta. Ujeedada summada ka jawaabaya waa in la dhimo fikradeeda sida ugu yar ee suurtogalka ah iyada oo aan la lumin aqoonsigeeda. Waxa muhiimka ah ayaa ah in daawadaha uu awoodo inuu aqoonsado astaanta iyada oo aan loo eegin mareegaha ay ku jiraan. Ama iyada oo loo marayo icon kaliya ama leh astaanta oo dhan.
Sidee loo sameeyaa calaamad jawaab celin leh?
Si loo sameeyo calaamad jawaab celin leh waa inaad xisaabta ku dartaa astaanta asalka ah ee astaanta. Noocyada xiga waxay ku xirnaan doonaan tan. Markii hore, waxaan soo sheegay noocyada suurtagalka ah ee ay yeelan karto. Waxaad ku samayn kartaa habkan oo dhan gudaha Adobe Illustrator, maadaama ay tahay aaladda ugu weyn ee abuurista astaanta ee adduunka naqshadeynta. Inkasta oo aad had iyo jeer caawinaad waydiisan karto xirfadlaha naqshadaynta garaafyada.
Waa inaad xisaabta ku dartaa arrimaha soo socda si aad u abuurto calaamad jawaab celinaysa:
Yaraynta cabbirka: waa inaad samaysaa imtixaanada cabbirka, maadaama ay jiri doonto cabbirka ugu yar oo aanad hoos u dhigi karin calaamadda, maadaama aanay noqon doonin mid la akhriyi karo.
Foomka: Logo lagu sameeyay qaab toosan la mid ma aha mid toosan. Summada wax ka qabtaa waa inay buuxisaa shuruudaha aad ku leedahay buug-gacmeedka shirkadda.
Marxalad: Logo si la mid ah shaashada kombiyuuterka looguma soo bandhigo taleefoonka, kan dambe, maadaama ay shaashaddu ka yar tahay, waa inaad la qabsato tibaaxaha ugu yar ee la akhrin karo. Kombiyuutarka, summadaada ka jawaabeysa waxay u badan tahay inay lahaan doonaan dhammaan walxaha ka kooban.
Blancos: Waxaa lagugula talinayaa in aad codsato meel cad oo isku mid ah dhammaan noocyada calaamadda jawaabta, si isbeddelku uusan u muuqan mid lama filaan ah. Adigoo hore u abuuray astaanta, waxaad qaadan kartaa, tusaale ahaan, cabbirka cad ee aad ku leedahay inta u dhaxaysa astaanta iyo magaca.
Versions: waxaad samayn kartaa kala duwanaansho dhammaan walxaha ka kooban summada: magaca, astaanta, xargaha.
Color: Haddii calaamaddaadu ka kooban tahay midabyo kala duwan, waxay noqon kartaa mid xiiso leh, iyadoo ku xiran noocyada, waxaad codsan kartaa hal midab ama mid kale. Laakiin ilaa inta midabkani ka caawinayo in la aqoonsado astaanta, haddii kale, ku codso midab isku mid ah dhammaan noocyada. Waa inaad sidoo kale tixgelisaa habka habeenkii, oo aad ka caawiso inaysan saameyn ku yeelan aragtida. Waxaa lagu talinayaa in kiiskani u muuqdo mid taban ama midab keliya.
fikradaha logo jawaaba
Shirkadda Faransiiska ah ee soo saarta dharka, saacadaha, barafuunyada iyo waxyaabo kale oo badan oo lagu raaxaysto ayaa awood u yeeshay inay la qabsato astaanteeda sida ugu yar ee suurtogalka ah. Ka bilow summada buuxda oo qaab jiif ah, waxa uu la jaanqaadaa nooca toosan oo kaliya isaga oo dhaqaajinaya yaxaaska booska caanka ah. Ugu dambeyntii, ka saar magaca astaanta oo ka tag kaliya yaxaaska, sababtoo ah waxay og yihiin in joogitaanka kaliya ee astaanta Yaxaaska caanka ah ay awood u leedahay in lagu aqoonsado meel kasta, iyada oo aan loo baahnayn in magaca la dhigo.
Nooca caanka ah ee jeansiinta, dooro inaad ka saarto sumadeeda oo ku dar calaamada calaamada in version ugu horeysay ee la dhimay. Halka kan labaadna uu doorto inuu meesha ka saaro dhammaan walxaha suurtogalka ah, isaga oo ka tagaya kaliya magaca calaamadda ee ku xigta calaamadda cas ee had iyo jeer la socota.
Marka laga hadlayo noocyada summada ka jawaabista Balance-ka Cusub, waxaan ku arki karnaa nooca koowaad sida xariiqyada caanka ah ee gooya "N" waa la dhimay tirada laakiin waxay kordhiyaan cabbirka, tani waxay la macno tahay, iyadoo yar, fikrad la mid ah ayaa la soo saaray. Nooca ugu fudud ee astaanta, kaliya xarfaha caanka ah "N" iyo "B" ayaa muuqda.
Gabagabo: maxaad u haysataa calaamad jawaab celin leh?
In summadaadu ay awood u leedahay inay la qabsato xaalado kala duwan waxay ku abuurtaa muuqaal wanaagsan daawadayaasha. Tiknoolajiyada ayaa horumarisa oo ay la sameeyaan taageerooyinka tignoolajiyada ee kala duwan, calaamaduhu waa inay ogaadaan sida loola qabsado iyaga, iyo waxa ugu horreeya ee macmiilka mustaqbalka ahi uu arko iyaga waa calaamaddooda. Haddii summadaadu ay awooddo inay la qabsato sida tusaalooyinka aan kor ku sheegay, waxay hubaal ahaan siin doontaa muuqaal firfircoon oo xirfad leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Logo ka jawaabaya: waa maxay iyo sida loo sameeyo